IPhone 7 iyo 7 Plus si sax ah ugama shaqeeyaan Android Wear | Wararka IPhone
IPhone 7 iyo 7 Plus si sax ah ugama shaqeeyaan Android Wear
Muddo sannad ka badan, Google waxay u soo bandhigtay dhammaan isticmaaleyaasha iPhone suurtagalnimada in la isku xiro aaladda Android Wear iyo iPhone, inkasta oo ay ugu wacan tahay xaddidnaanta barnaamijka moobiilka ee Apple, isla howlahaas looma isticmaali karo sida haddii aan awoodno. . Suuqa waxaan ka heli karnaa qalab aad u tiro badan oo ka socda soo saarayaal kala duwan, dhammaantoodna adeegsanaya barnaamijka Google saacadaha casriga ah, oo u furaya fursadaha kala duwan ee isticmaalayaasha iPhone, illaa iyo hadda waxay awoodi karaan oo keliya hal dhagax.
Ka dib markii la soo saaray moodooyinka cusub ee iPhone, kuwa ka mid ah taxanaha 7, isticmaaleyaal badan oo wata qalabka loo yaqaan 'Android Wear' ayaa leh dhibaatooyin markii ay la isticmaalayaan iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus. Dhibaatadan oo aan maaweelin mid ka mid ah milkiileyaasha saacadaha noocaan ah sheegasho ma jirto wado lagu xiri karo labada aalad in kasta oo xaqiiqda ah in moodeelladii hore ee iPhone-ka ee isla nooca iOS-ka ah lagu xidhi karo dhibaato la'aan.
Google waxay xaqiijisay dhibaatadan saameyneysa Motorola (jiilkii 1aad iyo 2aad), ASUS, Fossil, Tag Heuer, moodooyinka LG. iyo moodooyinka kale ee aadka loo yaqaan oo waliba ay maamusho Android Wear. Golaha Google ee la xiriira Android Wear ayaa waxaa ka buuxa cabashooyinka isticmaalaha iPhone 7 ee ah inaysan mar kale u isticmaali karin smartwatch-ka cusub ee iPhone-ka ah.
Ma garanayno sababta saxda ah ee dhibaatada, maadaama aysan u muuqan dhibaato software, oo ka shaqeynaysa aalado kale oo liita oo isla nooca iOS-ka ah. Waxay noqon kartaa arrin qalab 7 iPhone ah, dhibaato aan lagu xallin karin sii deynta cusbooneysiinta. Google waxay xaqiijineysaa inay baareyso dhibaatada dhibaatadan iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, wuxuu ku wargelin doonaa Apple inay isku daydo inay hagaajiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » IPhone 7 iyo 7 Plus si sax ah ugama shaqeeyaan Android Wear
Kaamirada Samsung Galaxy S7 Edge waxay sii wadaa inay ka fiicnaato iPhone 7